Ungakuqinisekisa kanjani ukuphepha kwezimo eziphuthumayo ezindaweni ezinhle-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
ISIKHATHI: 2020-11-24 HITS: 8
Izingcingo ze-SOS ukuthola usizo lwezivakashi ezindaweni ezinhle ubhekise kuzo izingcingo eziphuthumayo esetshenziswa ngokukhethekile izivakashi ezimeni eziphuthumayo ezindaweni ezinhle. Lapho ucingo lususwa, lungazishayela umugqa ozinikezele ngocingo oluphuthumayo. Izingcingo ze-SOS zisetshenziswa kabanzi ezindaweni eziheha izivakashi, ezimayini zamalahle, emhubheni, njll, nakwezinye izindawo lapho izingozi zingenzeka khona.
Faka okuheha izivakashi ezindaweni ezinhle ukufuna usizo kuzo Izingcingo zebhokisi le-SOS. Izivakashi zingaqiniseka ukuthi ukuhamba kuphephile. Umuntu ophethe iScenic Area Administration uthe uma izivakashi zihlangabezana nezinhlekelele zemvelo ezinjengemvula enkulu noma ezinye izimo eziphuthumayo, zingathola idokodo losizo oluphuthumayo le-SOS futhi zibuze ngqo isikhungo somyalo.
Uhlelo lokuqapha olunezinhlangothi ezintathu lwe-SOS lwakhiwe ngocingo lokukhomba ngocingo, amakhamera wokuqapha kanye nesikhungo sokulawula. Lapho kwenzeka isimo esingajwayelekile, ukushayela ucingo kungashayela isikhungo esilawulayo ngokushesha; isikhungo sokulawula singabiza ngqo indawo yesehlakalo ngokushayela ucingo, olusebenza njengesixwayiso nesithiyo.
Njengocingo oluphuthumayo, ucingo lwe-SOS lungasetshenziswa nakumakheshi, amatekisi, izitobhi zamabhasi, imigwaqo emikhulu, izitimela ezihamba ngaphansi, amathrekhi, ama-ATM, imigudu, amadokodo, amachweba, izimayini nemishini yokukhiqiza. Ifoni ye-SOS ifoni ephelele yezindawo ezinomswakama nezonakalisayo.
Abavakashi abaphuthumayo imizuzu engama-25 yokudlulisa izivakashi zisuka ezindaweni ezinhle ziye esibhedlela.
Endaweni ebabazekayo, indoda ethile yayigibela intaba. Lapho esephakathi nendawo ekukhuphukeni, wavele wahlaselwa yisifo senhliziyo. Umngani wakhe uthole inkinobho ocingweni lwe-SOS ngosizo oluphuthumayo oluvela kubavakashi abababazekayo eceleni komgwaqo. Ngemuva kwemizuzu engama-25, "isivakashi" sifike esibhedlela sigadwe ngudokotela ophuthumayo futhi sitakulwe ngempumelelo.
Yini okufanele ngiyenze uma ngilahleka ngenkathi ngidlala endaweni enhle? Yini okufanele uyenze esimweni esiphuthumayo? Ungethuki! Mane ucindezele isivakashi endaweni enhle ezungeze wena ukucela ifoni ye-SOS, futhi iminyango efanele ingavela phambi kwakho ngokushesha okukhulu ukukusiza futhi ikophule!
Ucingo lwe-SOS kulula ukusebenza: cindezela inkinobho ephuthumayo ukuxhuma ngokuzenzakalela esikhungweni sokulawula; uma kunesimo esiphuthumayo, isikhungo sokulawula singaphinde sishayele ngokushesha, ngaphandle kokuhlinzwa, xhuma ngokuzenzakalela kusikhulisa mazwi ukuze ukhulume.
I-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co, LTD ingumkhiqizi oneminyaka eyi-15 yokuthuthukiswa komkhiqizo wokuxhumana ngocingo kanye nesipiliyoni sokukhiqiza. Inkampani iwine inqwaba yamalungelo obunikazi bemodeli yokusetshenziswa, amalungelo obunikazi wokubukeka nokubhaliswa kwesoftware. UNingbo Joiwo usebenzisana nezingcingo ezingangeni manzi nezinomswakama, izingcingo ezingafakwanga ukuqhuma, izingcingo ze-IP, izinhlelo zokuxhumana ze-IP zezimboni, iphasishi elingaphansi komhlaba lamaphayiphu we-fiber optical, izingcingo zokusakaza nezokukhanya ezikhulisiwe, nezingcingo eziphuthumayo eziphezulu.